Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ gbasara Seychelles » Ọmarịcha Ọdụ na Seychelles: Ire Paradaịs!
Na -agbasa Akụkọ Europe • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Akụkọ kacha ọhụrụ na Germany • Akụkọ Ọchịchị • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • News • Akụkọ gbasara Seychelles • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem
Di na nwunye nwere ihu ọma na Paradaịs Seychelles
Mgbe Tim na Marlien Gentges banyere Qatar Airways maka ụgbọ elu awa iri na abụọ si Germany, ọ maghị na ha ga-erute na Seychelles na Mọnde, Ọktoba 12, dị ka onye ọbịa 11th nwere chioma, na-akara akara ngosi dị ịrịba ama maka ebe Indian Ocean Island na-aga. a na -eme ka ọnụọgụ ndị ọbịa maka afọ karịrị nke 114,859.
Di na nwunye a nwere ọtụtụ nkwadebe ha ga-eme tupu ha aga njem n'ihi COVID-19 ma na-echegbu onwe ha mgbe a kwụsịrị ha na-agbada na Seychelles.
Mgbe ahụ, ha chọpụtara na a na-eme ha dị ka akara akara dị mkpa maka ebe ha na-aga.
Maka ụbọchị mbụ ha na Mahé, Ngalaba Nlegharị anya na-anabata di na nwunye ahụ maka njem nlegharị anya na Mason's Travel's Anahita catamaran ebe ha nwere obi ụtọ ụbọchị.
Ndị hụrụ njem n'anya n'ime afọ iri atọ na ụma, Tim, onye egwuregwu bọọlụ aka aka na onye uwe ojii, yana Marlien, onye nkuzi ụlọ akwụkwọ sekọndrị, na anụmanụ ha na -ebi na obere ugbo na Dusseldorf na Germany.
Marlien na-enwe mmasị ịga njem, ebe Tim enweghị mmasị na mbụ n'ihi na ya na ndị ọrụ ya na ndị otu egwuregwu, ọ naghị enwe oge buru ibu iji mee njem dị anya site n'ụlọ. Agbanyeghị, mgbe njem mbụ ha na Canada gachara, ọ hụrụ n'anya ka ya na nwunye ya na-eme njem. Ọnụ ma ọ bụ naanị ya, di na nwunye ahụ agaala ọtụtụ mba gburugburu ụwa gụnyere Croatia, France, Italy, Netherlands, Austria, Sweden, Ireland, Spain, Fiji, na Sri Lanka. Seychelles bụ ebe mbụ àgwàetiti ha na-anọkọ ọnụ dị ka di na nwunye.
Marlien na Tim, bụ́ ndị zutere n’egwuregwu bọọlụ aka mgbe ha dị afọ iri na ụma, lụrụ na Germany na June 6, 2020, ma kọwaa otú ha si họpụta ebe ha ga-aga. N'ịbụ ndị na-eme njem na kọntinent nile ọnụ ma e wezụga Africa, di na nwunye ahụ chọrọ ime ezumike ezumike na obodo dị n'Africa; Ọ bụ mgbe ahụ ka ha chọpụtara wee họrọ Seychelles. Ha mere atụmatụ ịbịa na 2020 ka agbamakwụkwọ ha gachara mana n'ihi mmachi njem njem COVID-19, ha kwụsịrị atụmatụ njem ha.
"Anyị na-eme atụmatụ ịbịa Seychelles ozugbo agbamakwụkwọ anyị gasịrị mana n'ihi COVID nke a agaghị ekwe omume, yabụ anyị mere atụmatụ na 2021 ma ọ bụ 2022," Marlien kwuru na-ekpughe na mgbe ha na-eme atụmatụ ezumike ezumike ha, ọ chọrọ ịbịa Seychelles, na Tim ejighị n'aka nke ukwuu, mana mgbe ha rutere, ha abụọ gafere ọnwa na ọ bụ nhọrọ ziri ezi.
Marlien kwuru, "Obi dị anyị ụtọ na anyị bịara mgbe anyị mere n'ihi na o mere ka anyị bụrụ di na nwunye nwere chi ọma iji gosi akara ngosi dị ịrịba ama na Seychelles," Marlien kwuru.
Ha nwere ọtụtụ nkwadebe ime tupu ha eme njem n'ihi COVID-19 ma na-echegbu onwe ha mgbe a kwụsịrị ha ịpụ na Seychelles, naanị ịchọpụta na a ga-atụba ha dị ka akara akara dị mkpa maka ebe ha na-aga.
"Anyị enweghị ike ikwere na anyị bụ nọmba nwere chi ọma, ọ dị nzuzu. Ọ na-anabata nke ọma na ezigbo enyi. Onye ọ bụla gwara anyị na ndị nọ na Seychelles na-enwe ezigbo enyi ma anyị kwenyere,” Marlien na Tim ji obi ụtọ kwuo.
Di na nwunye ahụ nọ na Seychelles ụbọchị 8 kwuru na ha na-achọ ịhụ ọtụtụ agwaetiti dị ka o kwere mee na nri na-atọ ụtọ.
Maka ụbọchị mbụ ha na Mahé, Ngalaba Nlegharị anya na-anabata di na nwunye ahụ maka njem nlegharị anya na Mason's Travel's Anahita catamaran ebe ha nwere obi ụtọ ụbọchị na-atọ ụtọ ịgagharị. ihe ịtụnanya nke Seychelles mmiri nke Ste. Ogige Anne Marine.
Site na iko a na-ahụ anya nke mmiri nke na-emikpu n'ime mmiri, ha lere anya ha hụ ọtụtụ azụ azụ ebe okpomọkụ, ihe ndị e kere eke na-ebi na ogige coral mara mma nke ogige ahụ. Nke a sochiri igwu mmiri n'ime mmiri turquoise na-ekpo ọkụ, na-azụ azụ ndị bịara nso ka ha na-agba mmiri na ogige mmiri.
Tim na Marlien na-anụ ụtọ nri ehihie ha na ihe nkiri egwu site n'aka ndị otu Mason's Travel tupu ha agaa n'ikpere mmiri iji chọpụta Moyenne Island na ahịhịa na anụmanụ dị ịtụnanya. Obi tọrọ Marlien ụtọ nke ukwuu ịhụ ma zute Nnukwu Mbe na-agagharị n'ógbè ahụ yana nwa ọhụrụ nọ n'ụlọ akwụkwọ ọta akara. “Enwere m ike ịhụ izute nnukwu mbe na ndepụta ezumike m; Obi dị m ụtọ nke ukwuu,” ka o kwuru.
Di na nwunye a ejirila oge nọrọ, kayak na snorkeling, yana igwu mmiri na ọdọ mmiri a ma ama na Bliss Hotel Glacis na ịga leta La Digue Island ebe ha na-atụ anya ịgba ígwè gburugburu agwaetiti ahụ.
Marlien na Tim kwuru na nlọghachi dị na kaadị ahụ, na ha ga-achọ ịlaghachi na Seychelles, ha na ndị enyi ma ọ bụ ezinụlọ.